Nwere ike Food Machine Manufacturers & Suppliers - China Can Food Machine Factory
A na-eji frta eghe falafel, tempura, bọọlụ anụ, bekee nduku, banana banana, ọkụkọ dum, ụkwụ ọkụkọ, ọkụkọ anụ, mkpụrụ anụ, oporo, ahụekere, agwa, akwụkwọ nri na ngwaahịa ndị ọzọ.
Soft swiiti igwe na mmepụta akara usoro eruba: (1) sugar dissolving; (2) shuga na-ebugharị ya; (3) na-ekpo ọkụ na nchekwa nchekwa; (4) agwakọta maka ekpomeekpo na shuga; (5) sirop n'ime hopper; (6) itinye (contering ndochi) akpụ; (7) ịjụ oyi n’ime ọwara; (8) ngbanwe na ime ka obi jụrụ ya ma na-ebugharị ya; (9) Mbukota. A na-ekewasị swiiti (Bekee: swiiti) n'ime swiiti siri ike, swiiti siri ike, swiiti mmiri ara ehi, swiiti gel, swiiti na-egbu maramara, swiiti nke chịngọm, swiiti na-afụ ụfụ na swiiti etinyere. N'ime ha, hard ca ...
Ngwongwo biya biya ohuru na-ezo aka na akụrụngwa eji mepụta biya, nke nwere ike kewaa n'ime ngwa biya biya, ngwa ọrụ biya na obere ngwa biya. Ngwa eji eme biya nke biya na-adịkarị mma maka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, Ogwe mmanya, anụ oriri, obere na ndị na-eme biya.